SUPERBAHİS786 GALATASARAY’DA FLAŞ MUSLERA KARARI!
အဝါရောင်ကလပ်အသင်းတွင် ၁၀ နှစ်မြောက်ပြီးဆုံးတော့မည့်ဖာနန်ဒို Muslera နှင့် ပတ်သက်၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ ဥရုဂွေးဂိုးသမား၏စာချုပ်သက်တမ်းတိုးသွားမည်ဟုဆိုထားသည်။ စပိန်စာနယ်ဇင်းများမှသတင်းများအရ Galatasaray သည် Muslera ၏စာချုပ်ကိုနောက်ထပ် ၂ နှစ်တိုးရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ အပြောင်းအရွှေ့ကိုလာမည့်နေ့ရက်များတွင်တရားဝင်ကြေငြာမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၂ ဝ ၁၁ ခုနှစ်နွေရာသီတွင်လာဇီယမ်မှဂလာတိဆာရာသို့လက်တင်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန် ၆.၅ သန်း၊ ယူရို ၇၅၀,၀၀၀ ယူရို + လီရီကာကာနာသည်ချွေးဝတ်စုံဖြင့် Galatasaray သည် ၉ နှစ်တာနှင့်တူရကီစူပါလိဂ်ချန်ပီယံ ၅ ဦး၊ / p> restbet giriş işleminizi mobil olarak da yapabiliyorsunuz.
Beşiktaşသည်ပြောင်းရွှေ့မှုနှေးကွေးခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်၍ သွားနေခဲ့သည်။ နီကာလာ Kalinic နှင့်ညှိနှိုင်းမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ လူမည်းလူမည်းများသည် PAOK ကိုယူအီးအက်ဖ်အေယူအီးအက်ဖ်အေဒုတိယအကြိမ်ခြေစစ်ပွဲပြိုင်ပွဲတွင်ရင်ဆိုင်ရပြီးဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။ သင်မှတ်မိမယ်ဆိုရင်အနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကလပ်က Balotelli ကိုစိတ်ဝင်စားနေသည်။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေသောBeşiktaşသည် Balotelli နှင့်သဘောတူညီမှုရရန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ Assist Analysis ၏အစီရင်ခံစာအရ Sergen Yalçınသည်မကြာသေးမီက Mario Balotelli အကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Balotelli သည်Beşiktaş၏စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကိုလက်ခံသည်ဟုဆိုကြသည်။ နောက်ကျငွေများလက်ခံရရှိခဲ့သည် အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က Balotelli အားပြောကြားခဲ့သည်။ Balotelli သည်Beşiktaşသို့လာမည့်နေ့ရက်များကိုရေတွက်နေသည်။ restbet giriş güvenilir bahis oynama firması ile her gün kazanç sahibi olabilirsiniz.
SUPERBAHİS786 SERGEN YALÇIN NİKOLA KALİNİC’İ BEKLİYOR
လူမည်းများနှင့်လူဖြူများသည်ဂိုးသွင်းသူအားလွှဲပြောင်းရာတွင်နည်းလမ်းအားလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ နီကိုလးကာလီနစ်ခ်ျနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သူBeşiktaşသည်ကစားသမားအားဆုံးဖြတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ Beşiktaşနည်းပြ Sergen Yalçınကလည်းရှေ့သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်နာရီပေါင်းတစ်ထောင်အပြီးသတ်ရန်သူ၏တောင်းဆိုချက်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ Sergen Yalçınကမန်နေဂျာအား“ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်ကြရအောင်” ဟုစာတစ်စောင်ပို့ခဲ့သည်။ တိုက်စစ်မှူးအတွက်အနက်နှင့်အဖြူများသည်နီကာလာကာလီနစ်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်။ Atletico Madrid ကိုအခမဲ့စွန့်ခွာရန်မျှော်လင့်နေသော Kalinic သည်သူ၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်အားပြန်လည်ဖြေကြားရန်မျှော်လင့်ရသည်။ restbet giriş kazandıran güvenilir ve sağlam bir bahis oynama platformudur.